6 nke akwụkwọ akụkọ mpụ mbụ maka 2018 | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
6 nke akwụkwọ akụkọ mpụ mbụ maka 2018
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Akwụkwọ, Novela, Black akwụkwọ
Bọchị ole na ole iji gwụ afọ, udo na ịhụnanya niile na ezumike ndị a na -eche obi ụtọ. Ma ọ bụ ọ bụghị. N'ihi ya, m na-ebute onwe m ụzọ na ihe omuma ndi mbu na nke ndi m huru n'anya, nke kachasi oji. Dị ka iche na ọkụ na ụtọ nke polvorones na marzipan. Gaba 6 nke aha mba na mba mbụ emi ẹmịn̄de idahaemi ke Jenụwarị. Site na akwụkwọ ikpeazụ n'usoro ahụ site n'aka onye ọkà n'akparamàgwà ndị omempụ Sweden bụ Sebastian Bergman ma ọ bụ mbupu ahụ nke ọkachamara na ụjọ nke mmụọ bụ nke ọzọ bụ Sebastian, Berliner Fiztek.
1 Ọrịa ahụ - Jorge Fernández Díaz
2 Anwụ abụghị ihe na-ewute m nke ukwuu - Ines Plana
3 Mbupu - Sebastian Fiztek
4 Eziokwu nke Alligator - Massimo Carlotto
5 Ntaramahụhụ ziri ezi - Horjth & Rosenfeldt
6 Lovebọchị ịhụnanya furu efu - Javier Castillo
Ọnya ahụ - Jorge Fernández Díaz
Na ngwụcha ọnwa Jenụwarị ebiputara akwukwo ohuru nke onye ode akwukwo a na ndi nta akuko, nke na ewetaghachi azu Onye na-elekọta ihe, àgwà arụmụka nke Dagger.
Otu nọn efu ma hapụ ozi enigmatic. Otu onye nkwado Pope Francis nyere iwu ka ndị ọrụ ọgụgụ isi abụọ chọọ ya ebe ọ bụla. N'otu oge, onye ndụmọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke gọọmentị Argentina chụrụ Gọvanọ nke otu ebe na Patagonia go ya ọrụ iji meziwanye ọdịdị ya ma zere ọdachi ntuli aka. Mana o gha enwe enyemaka Remil rue mgbe ha abuo gha abanye a Mpụ obodo na nzukọ ọjọọ.
Chebara nandọrọ ndọrọ ọchịchị hriller with crime novel mix, n'ime ya akụkọ ihe omimi anọ dị omimi jikọtara ya na nyocha nke nyocha na nnukwu ụda egwu cinematographic.
Anwụ anwụ abụghị ihe na-akacha ewute - Ines Plana
Ndị ọzọ Nkọwapụta izuzu mara mma na ihe odide na akụkọ banyere mmiri. Ọ na-agwa anyị banyere otu nwoke nke gosipụtara na a kwụgburu ya n'oké osisi pine nke dị na mpụga Madrid, na-elepụ anya ya. N’otu akpa ya, ha hụrụ akwụkwọ ebe e dere aha nwanyị na adres ya: Sara Azcarraga, onye bi kilomita ole na ole site na mpụ ahụ. Onye na-adịghị ike, onye owu na-ama, onye na-a vụ mmanya vodka, Sara na-emebi emebi, owu na-a andụ ma na-ezere kọntaktị mmadụ ọ bụla.
Julián Tresser, onye isi ndị ọrụ obodo, na-elekọta ikpe a, nke onye na-eto eto na-enyere aka Chur, onye na-eche nchọpụta mpụ na nke mbụ ya, na-enweghị ihe ngosi ọ bụla. Tresser ga-achọpụta ụfọdụ eziokwu ga-enye a ọdachi dakwasịrị ịdị adị ya ha ga-akakwa ya akara ruo mgbe ebighị ebi.
Mbupu - Sebastian Fiztek
Ọhụrụ thriller site n'aka onye edemede German gara nke ọma Terapia, Onye njem 23 y Ihe oru Joshua. Oge a na-akọ akụkọ banyere onye ọkachamara na-eto eto Emma stein, onye na-anaghịzi ahapụ ụlọ ebe ọ bụ na e dinara ya n'ike na ụlọ nkwari akụ. Ndi onye nke atọ gburu psychopath na naanị onye gbapụrụ ndụ, ọ bụ ezie na ahụghị ihu ya. Otu ụtụtụ, onye na-ekesa akwụkwọ ozi na-ahapụ otu ngwugwu onye agbata obi ya, onye ọ na-amaghị. Site na ịnakwere ya, ọ naghị eche na nro kachasị njọ ya na-amalite.
Eziokwu nke agu iyi - Massimo Carlotto
Nke a bụ aha izizi n’usoro nke onye na - enyocha ihe nzuzo kpọrọ aha ya bụ Cayman ma dabere na ndụ onye dere ya.
Na 1976 Alberto Magagnin a mara ya ikpe maka ogbugbu e gburu Evelina Bianchini. Na 1993, ka ọ na-akwụ ụgwọ, Magagnin lara n'iyi n'enweghị ihe kpatara ya. Yabụ onye ọka iwu gị, Barbara Foscarini, kpebiri ịgbanwe nye onye nyocha nke onwe, onye Marco Burati, agu iyi. Ọ hụrụ n'anya blues, Calvados na-aerụ ihe ọ andụ andụ na onye ikpe ikpe maka nkwenye na-ezighị ezi.
Na onye ya na ya na-enweghi ike ikwusi, Beniamino Rossini onye ahia nzuzo, Cayman na-amalite nyocha nke ga - eduga ya ịbanye na ins na njedebe nke ikpe a na - emechi ogologo oge. Magagnin enweghị ihe mere ọ ga-eji gbuo mmadụ, ma profaịlụ ya mere ka ọ bụrụ scapegoat zuru oke.
Ntaramahụhụ ziri ezi - Horjth & Rosenfeldt
El ise aha nke a acclaimed usoro starring na Onye Sweden ọkà n'akparamàgwà mmadụ Sebastian Bergman na-ahụ ìhè n'etiti ọnwa Jenụwarị. Ọ na-agwa anyị banyere a kpakpando telivishọn hụrụ nwụrụ anwụ site na égbè ruo n'isi n’ụlọ akwụkwọ a gbahapụrụ agbahapụ. Ahụ ya na-eche mgbidi na kegide ya oche bụ ụfọdụ akwụkwọ ule.
Ogbugbu a bụ nke mbụ na usoro nke ga-enwe ndị a ma ama dị ka ndị metụtara. Ndị agha Torkel Hölgrund Ha ga-edozi ikpe ahụ, dịka mgbe niile, ọkachamara na ihe ọmụma nke Sebastian Bergman ga-enyere ha aka. Ha ga - enwe ike ịgbaso ihe ngosipụta dị na ntanetị na ntanetị na akwụkwọ ozi na-enweghị aha ebipụtara n’akwụkwọ akụkọ iji dozie ihe omimi ahụ.
Thebọchị ịhụnanya furu efu - Javier Castillo
Javier Castillo abụwo onye edemede akụkọ dị mkpirikpi kemgbe uto. Akwụkwọ akụkọ mbụ ya bụ nke nwere ọganiihu azụmaahịa na ịntanetị aha Daybọchị izu ike ahụ furu efu. Ugbu a, ọ na-egosi nke a, akụkọ ọzọ nke nwere obi abụọ na ịhụnanya nha anya, nke na-ekwe nkwa ịbụ ihe ọhụrụ.
Na elekere iri na abụọ nke isi ụtụtụ nke ọnwa Disemba 14 nwata nwanyi juputara na aru aru Ọ na-egosi ọtọ na New York FBI eweta na ọtụtụ acha ndetu na aka ya. Inspera Bowring, onye bụ onyeisi Criminology Unit, ga-agba mbọ ịchọpụta ihe nwa agbọghọ a na-ezo na njikọ ya na okwu ọzọ, nke nwanyị gbupụrụ ya isi awa ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị na aha ya dabara na nke edere na otu ederede.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Black akwụkwọ » 6 nke akwụkwọ akụkọ mpụ mbụ maka 2018
Charles Dickens. Nwoke cheputara ekeresimesi.